GORSA OBBOLUMMAA OBBOLOOTA OROMIYAA KEESSA JIRANIIF: Bilisummaa Kumaatiin. – Beekan Guluma Erena
GORSA OBBOLUMMAA OBBOLOOTA OROMIYAA KEESSA JIRANIIF: Bilisummaa Kumaatiin.	Beekan Erena
Education June 10, 2016OROMO
42SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
GORSA OBBOLUMMAA OBBOLOOTA OROMIYAA KEESSA JIRANIIF.
Uummanni Oromoo “elaafi Elaameetti’ amana. Rakkoo keenya ifatti walitti himnee salphina barabaraa jalaa ba’uunis fardiidha. Mee obboloota jaarmiyaalee Oromoo akka gurmuutti jirtanis ta’e dhuunfaaf dhaamsi kiyya kunooti. Abbbootii aangootiif!
Kaabinoota Gandaa hanga Godinaaf, Dabalees abbootii aangoo olaanoo Oromoof!
Wanti jennu baay’een hin jiru! Waan jechuu mallu hedduus waliin haasawaa turreerraatii ammas irra deebinee wanti haasofnu yoo jiraate ‘Quuqama’ akka horattanidha!
Quuqama gaafa jennu:
– Nyaatanii garaa nama guutee garaachaan dhukkubsachuu miti,matta’a nyaatanii hidhamuus miti,hiyyeessa lafasaarraa buqqisanii qe’eesaarraa ari’anii hallayyaa hiyyummaatti darbachuu miti,yookaanis ammoo Qarshii uummatarraa walitti qabanii misooma uummataaf ooluu qabu uummata ofii
beelessanii Tigraayiif yookaan Ormaaf kennuu otoo hin taane miidhama uummata ofii arganii,uummatichas akka ofiitti hubatanii, dhiibbaa uummata ofiirra gahe san akka rakkina ofiitti erga ilaalaniin booda
uummata suniif dhimmanii uummata saniif gadduu,dhiiguu fi uummata miidhame san cinaa dhaabachuu fi haqa uummataa dhokate qotanii baasuun haqaan dhaabachuudha!
Maarreekaa,isinhoo maal fakkaatturee? Hundi keenyayyuu ni beeknaatii,isin aangooma xiqqooshee argannaan namni nama isinitti hin fakkaatu! Namaafis hin gadditan,namaafis hin dhiigdan, garaa keessaniif malee saba keessaniif yeroo dhaabattan agarrees,dhageenyees hin beeknuutii,isinis adaraa!…kana booda barri itti walitti garaa jabaatan,barri itti wal gowwomsan,barri itti walirraa nyaatanii wal nyaatan ni gahaatii,ammaan booda saba keessaniif dawoof gaachana taatanii isa :
-uummatarraa maallaqa funaantanii nuyiin beelessaa ormaaf gamoo
-Isa Qotee bulaa lafasaarraa kaastanii hiyyummaatti dabarsitanii isa laattanii lafasaa ammoo gurgurattanii ittiin sooromtanis asumatti dhaabaa,ni gahaatii!
-Maallaqaan gowwomtanii dhalataa Oromoo boru abdii biyyaa ta’uurra darbee addunyaaf eeggamu kichuutti akka hin conqolaafnee fi dabarsitanii hin laanne! Warra dhugaaf dhaabateen ‘shororkeessaa’ hin
-Ajaja alagaa fi aangoo sobaa boru sirraa molqamuuf jettanii bara baraan seenaa Oromoo keessatti abaaramoo hin ta’iinaa!
-Walumaa galatti Qabeenya Oromoo fi Oromiyaa karaa qaxxaamuraan qabeenya horachuu fi jaalala Alagaa argachuuf jecha gurgurtanii qawwee fi rasaasa ittiin lammii keessan akaayan ofitti akka hin binne jechaa
wantoota hafan maras yeroo biraa irratti akka mari’annuuf waaqni Oromoo nama borii nu haa taasisu!
Qomoo keessaniif dhaabadhaa,quuqamaafii! Lammiidhaaf gaachanni lammiidhuma malee alagaan alagumakaa! Aangoonis,qabeenyis yeroof malee isheenoo fixeensadha! Har’a mul’attee bor baddi,qabeenyaa fi aangootti hin amaniinaa!
Elaa,akka ta’ee,ni beekna hedduun keessan bulchiinsa mootummaa biyyattii jibbitanii buddeen keessaniif waan gootan dhabdanii alliftan! Isin gaheera barri callisuu!…buddeenni poolisii ta’aniif qofaa hin
argamu,karaan ittiin bulan hedduutu jiraatii,adaraa obboloota keenya Haadhoo keessan mootummaan rasaasaan daguugu kanaaf garaan isin haa nahu!…Oromoon dhumaa jiraatii,qawwee isinitti hidhan san isaanumatti garagalchaatii saba keessaniif dhaabadhaa!…otoo meeshaan isin harka jiruu uummanni keessan maaliif gidirfama?,maaliifis dararama?,maaliif gabrooma?
Kan biraammoo: “ebelu yakkamaadha…ebelummoo shakkamaadha…ebelu to’annoo jala haa oolu!” Jedhanii yommuu abboonni aangoo sobaa san obbolaa keessan dararuuf isin ajajan isa qabuuf jirtan saniif mala malaatii akka miliqu godhaa malee,adaraa dhiiga Oromummaa keessanii ijoollee keessan,haadhoo keessan,hiriyaa keessan,fira keessan,ollaa keessan:walumaa galatti saba keessan hidhaaf dararaaf dabarsitanii akka hin laanneef Imaanaa akka isinitti ta’u dhiigaaf kabaja Oromummaatiinan isin gaafadha!
Akkuma gaariin jiru yartuunis ni jirtiitii,isin keessaammoo garaaf qofaa bitamee kan saba isaa qarshiitti gurguruuf fiiguu fi kan godhi jedhan hundaaf gurra laatee qomoof lammiisaa irraanfatee sabuma irraa
dhalate sun hanga dhiigasaa dhangalaasuu fi dhangalaasisuuf gahuutti carraaqu sanis gorsaa,itti himaa…didummoo akka tarkaanfii irratti fudhattanis gamanumaan isinii dhaamuu barbaadna!…bilisummaan hiyaateeraatii bilisummaa uummata Oromoo keessatti qooda isinirraa eegamu akka gumaachitan isin gaafanna! Kana malees wantoota jedhaman kanneen hin gootan taanaan gaafa bilisummaan dhufe eenyumaanuu akka hin komanne,seenaa hojjettanii darbuu otoo qabdanuu akka Goobanaa Daacceetti seenaan akka hin abaaramne,adaraa!
Barsiisaa!…Agartuuf qaroo addunyaa!,isa addunyaa dukkanooftuuf ifa laatte!,isa sammuu uummata addunyaa qartee irra lafaaf keessa lafaa jijjiirsiftee waan abjuun dhufu dhugaa goote,waayee Oromummaa nutu isin barsiisa miti,isinirraa akka barannu shakkii hin qabnu!. Maarree akkuma barumsaan addunyaa jijjiirsiftanii utubaa qaroomina addunyaa taatanittis otoo isinis waayee eenyummaa Keessaniis ijoollee
barsiistanii hedduu nama boonsaam!…Gabrummaa keessaa akkamitti akka bahanii fi akkamitti tokkoomuu akka danda’an karaa itti agarsiisaa,wanti isin gootan ni milkaa’aatii!…maarree,isa samiirra furguggifamee addeessarra qubatee lafatti deebi’us isinumatu barsiiseem!.
Dhaloonni ammaas matumasaatiinuu qaradhaatii qajeelfama xiqqoo barbaada,waan xiqqoo itti agarsiifnaan ofiifuu xumuraatii furtuun walabummaa,cabsituun wanjoo gabrummaa hunduu isin harkaatii adaraa
Waaqa Oromoo!,furtuu san uummata keenyaaf laadhaa! Dadhabdan banaafiitii furtuu sanuu of harkatti hambifadhaa!. Kana malees,Oromoon martuu sababa Oromoo ta’eef qofaa yakkamaa ta’eetii,adaraa keessan Ijoollee keessan sodaa aangootiif jettanii dabarsitanii hin laatiinaa seenaan isin gaafataa! Warra Oromoo ta’anii ijoollee Oromoo dabarsanii arraba qawwee,rasaasaaf kennan irree tokkummaatiin of keessaa mancaasaa!…
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa42SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← JEDHEE BOO’E GURREEN-Seenaa Abdiisaa’tiin-Walalooo Ajaa”ibaa kana dubbisaa!! Xalayaa OPDOf barreeffame-ammoo irraa baratamu!
MUKAAF SIBIILATU WALIIN DUBBATE-Fiixabas Habroo’tiin →